Endrik'io pejy io tamin'ny 24 Martsa 2018 à 12:49
159 octets ajoutés , il y a 4 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 22 Martsa 2018 à 14:28 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 24 Martsa 2018 à 12:49 (hanova) (esory)
Ny '''Tetiandro hebreo''' dia [[tetiandro]] ampiasaina ao amin'ny fivavahana jiosy sy ny fanjakan'i Israely ankehitriny. Tetiandro manaraka ny fihodin'ny volana sy ny [[masoandro]] ny tetiandro hebreo, ka ny iray volana dia miovaova ho 29 na 30 andro. misyMisy iray volana fanampiny izay asisika isaky ny telo taona satria tokony ho feno ny tsingerim-potoana 19 taona atao hoe Tsingerin'i Metona (filozofa grika tamin'ny taonjato faha-5). Avy amin'io tetiandro io no nahazoana ny Tetiandro jiosy izay ampiasain'ny Fanjakana Israeliana.
Ny andro iray dia manomboka amin'ny filentehan'ny masoandro. Ny herinandro dia manomboka amin'ny AsabotsyAlahady ary mifarana amin'ny ZomaAsabotsy. Ny iray volana (hebreo: חודש / ''hodesh'') dia manomboka amin'ny andro ahatsinanan'ny volana. Ny taona iray dia misy 12 volana nefa indraidray mety hisy 13 volana.
Ny ao amin'ny Baiboly dia voalaza fa ny taona iray misy 12 volana (1Mpan. 4.7 sy 1Tant. 27.1-15) ary ny soratra ao amin'ny Genesisy dia hoatry ny milaza fa ny volana tsirairay dia misy 30 andro (Gen. 7.11; 8.3-4; 8.13-14). Hafa ny anaram-bolana nampiasain'ny Hebreo talohan'ny fahababoana fa tsy mitovy amin'ny ampiasaina amin'izao. Amin'ny ankapobeny dia ny laharan'ny volana ao amin'ny taona no natao anaran'ny volana. Misy anaram-bolana vitsy izay voalaza ao amin'ny Baiboly -, dia ireo nogasina hoe ''Abiba'' (hebreo: אביב /Aviv), ''Ziva'' (hebreo: /Ziv), ''Etanima'' (hebreo: אֵתָנִים/Ethanim) ary ''Bola'' (hebreo: /Bul). Ny Abiba dia nolanavolana voalohany -, ny Ziva no faharoa -, ny Etanima no fahafito -, ny Bola no fahavalo. Heverina ho avy amin'ny anaram-bolana kananita izy ireo.
Ny volalan ''Aviv'' (midika ara-bakiteny hoe "lohataona") dia voaresaka ao amin'ny [[Bokin'ny Eksodosy]] sy ny [[Bokin'ny Deoteronomia]] (Eks. 12.2; 13.4; 23.15; 34.18; Deo. 16.1). Ny volana ''Ziv'' (midika ara-bakiteny hoe "fahazavana") dia voaresaka ao amin'ny [[Boky voalohan'ny Mpanjaka]] (1Mpan. 6.1; 6.37). Ny volana ''Ethanim'' (midika ara-bakiteny hoe "mahery" -, endrika milaza maro) dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 8.2). Ny volana ''Bul'' dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 6.38).
Raha ilaina ny hanampy iray volana dia ampiana Adar I ('אֲדָר ב) izay apetraka ao aorian'ny Shevat ny Adar II (אדר א). Ny totalin'ny andro ao anatin'ny taona iray dia mety ho 353, 354 na 355. Marihina fa ny salan'ny taona manaraka ny fihodin'ny masoandro dia maharitra 365 andro sy 1/4.
maromaroMaromaro ireo andro ankalazain'ny Jiosy ka ny sasany efa natao araka ny voasoratra ao amin'y [[Tanakh]] fa ny sisa niforona taty aoriana. Ireto avy ireo fety jiosy ankalazaina isan-taona:
* Ny ''Yom Kippur'' (hebreo: ''יוֹם כִּיפּוּר''‬ na ''יום הכיפורים'' / ''Yom ha-KippourimKippurim'' "andron'ny famelan-keloka") anaovana fifadian-kanina sy vavaka be; tanterahina amin'ny 10 Tishri;
* Ny ''Sukkot'' (hebreo: חַג הַסֻּכּוֹת / ''Hag ha-Sukkot'' "fetin'ny trano lay" na "fetin'ny tabernakely"); ahatsiarovana an-kafaliana ny nanampian'Andriamanitra ny [[Zanak'i Isiraely]] tamin'ny nivoahany avy any Ejipta sy iravoravoana amin'ny fahataperan'ny tsingerin'ny fotoam-pambolena amin'ny taona; ankalazaina manomboka amin'y 15 hatramin'ny 21 (na 22) Tishri;
* Ny ''Khanukka'' (hebreo: חג החנוכה / ''Hag ha-Khanukka'' "fetin'ny fanorenana") ; ahatsiarovana ny fitokanana indray ny alitara fanaovam-panatira ao amin'ny [[Tempoly]] faharoa ao Jerosalema -, tamin'ny fiverenana amin'ny fanompoam-pivavahana jiosy -, telo taona taorian'ny nandraran'i Antiokosy IV (Seleokida).
* Ny ''Shavuot'' (hebreo: שבועות "herinandro") ankalazana ny fijinjana ny [[varimbazaha]] sy ahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny Torah tany an-tendrombohitra Sinay; ankalazaina amin'ny 6 Sivan.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/814034"